Yintoni iLitecoin? Sikuxelela yonke into ngale mali yedatha | I-CryptoLog
Eyokuqala (ngokubhekisele kwiBitcoin) ithambekele ekuzuzeni udumo nokwamkelwa ngamandla angaphezulu kunawokugqibela okanye abalandelayo (ngokubhekisele kwezinye ii-cryptocurrensets) phakathi koluntu ngokubanzi. Kodwa ayenzi ukuba ibengcono, ibenza ukuba baziwe ngcono. Yiyo kanye le nto iLitecoin (LTC) yenziwe, njengokuphuculwa kwekhowudi esetyenziswa yiBitcoin, oko kukuthi, yiAltcoin. Abanye babhekisela kuyo njengesilivere phakathi kwee-cryptocurrencies, Ukunikezela ngegolide Bitcoin ngokuba yeyokuqala kunye nexabiso layo lentengiso.
Sinokuthi iLitecoin yayiyimali ehamba phambili ngexesha layo, apho kwilizwe lobuchwepheshe kwaye ngaphezulu kwayo yonke i-blockchain yenzeka ngokukhawuleza. Inguqulelo yokuqala yasungulwa ngo-Okthobha u-2011 (kuphela iminyaka emi-2 emva kwe-Bitcoin) ngenjongo yokusombulula iingxaki eziza kubakho kwi-Bitcoin kwikamva ngenxa yokungaqheleki kwayo. Nangona iBitcoin yayingaziwa, uCharlie Lee, umyili wayo, wayeyazi indlela yokujonga ukuba kwixa elizayo izigidi zabantu ziya kuqala ukwamkela ezi ndlela zintsha zokuhlawula, yiyo loo nto wadala iLitecoin.
Ngubani umdali weLitecoin?
NguCharlie Lee, isazinzulu sekhompyuter esazalelwa eIvory Coast kwaye wafudukela eUnited States eneminyaka eli-13 ubudala. Yaziwa kakuhle kwihlabathi lee-cryptocurrensets. Uphumelele eMassachusetts Institute of Technology nge-Bachelor's kunye ne-Master's degree kwi-Computer Science ngo-2000. Ngeli xesha leminyaka, uCharlie Lee wasebenzisa ithuba lakhe lokubhala ukubhala itekhnoloji yeBitcoin Blockchain. Kwaye ekugqibeleni wakhupha iLitecoin kuluntu ngo-2011 kuphela emva kweengqekembe ezili-150 ezombiwa.
Ngokuka-Lee, wayengenazo phakathi kwezicwangciso zakhe zokukhuphisana neBitcoin, kodwa yayiyimpumelelo leyo ngoJulayi 2013 waqala ukusebenza kuyo Coinbase emva kokushiya uGoogle. Emva kwexesha kwi-2017, emva kongquzulwano lomdla, wathengisa yonke iLitecoin yakhe. Hayi ngenxa yeso sizathu wayeza ukurhoxa, kodwa esona sizathu siphambili ngokokutsho kwakhe kwiReddit nakwi-Twitter yayikukuba ingxelo zakhe zobuqu ngenxa yempembelelo yakhe inokuchaphazela ixabiso lengqekembe, into angafuni ukuba yenzeke. Ukulandela esi sigqibo, U-Lee uqhubeke nokusebenza ngokusisigxina kwiLitecoin Foundation, ezimiselwe ubukhulu becala ekukhuthazeni kunye nokusetyenziswa okutsha kokuphunyezwa kwemali.
Zeziphi iimpawu ezifanayo kunye nokwahlula iLitecoin kwiBitcoin?
Phakathi kokufana kwayo sifumanisa ukuba imali nganye inokuba nendawo ezi-8, ezenza ukuba yahlulwe njengeBitcoin. Zombini zisebenzisa itekhnoloji efanayo, iBlockchain. Zigcinwa zibulela kwinkqubo yezemigodi, kwaye ubunzima bemigodi bonyusa zonke iibhloko ezingama-2.016. NjengoBitcoin, isebenzisa inkqubo yoBungqina boMsebenzi (PoW), kwaye inciphise izinga lokukhutshwa kwayo yonke iminyaka emi-4 okanye njalo.
Isekwe kwinethiwekhi ye-P2P njengeBitcoin, kodwa inkqubo yemigodi yahlukile. Shiya i-SHA-256 iseti yemisebenzi ye-hash ye-cryptographic ukukhetha kuyo Scrypt. Ialgorithm ekhawulezayo yezimayini enkosi kwinto yokuba ubungakanani beebhloko bungaphantsi kwe-100kb.
Inani lee-cryptocurrensets ezinokubakho kwiLitecoin blockchain zizigidi ezingama-84, Amaxesha ama-4 ngaphezulu kwezigidi ezingama-21 zeBitcoin. Inqanaba elamkeleke ngakumbi lokuhlawula amatyala kunye nokusilela.
Isantya sokwenza ibhloko nganye yimizuzu emi-2 nesiqingatha. Oko kunciphisa ixesha lokuqinisekisa kwintengiselwano nganye.
Iindleko zentengiselwano yenye yexabiso eliphantsi kwimarike yemali yedijithali.
Imigodi yeLitecoin ayenziwa ngesixhobo se-ASIC esibiza kakhulu. Imayini yeLitecoin inokwenziwa ngee-CPU ezilula, nayo nayiphi na ikhompyutha enaye nawuphi na umsebenzisi ekhaya, nkqu nee-GPU, amakhadi emizobo.
Isixa somvuzo asifumana emgodini ziingqekembe ezingama-25 kwibloko nganye.
Uzalelwe njengempendulo yeengxaki zexesha elizayo ezinokuthi zenziwe yiBitcoin, Iinjongo zikaLitecoin yayiza kuba yimali ekwaziyo ukukhuphisana nezinye iinkqubo zokuhlawula. Yiyo loo nto inxenye yokuhlengahlengisa intengiselwano kunye neendleko eziphantsi. Ngaphandle koku, kufanele kuqatshelwe ukuba umthamo wayo wentengiselwano usekude kwezinye iindlela, ezinje ngamakhadi etyala, kodwa njengeBitcoin, ukuthunyelwa okuninzi kunokwenziwa kwiidilesi ezahlukeneyo ngentengiselwano efanayo.
Ukukhangela iqonga lokwenza iintlawulo ngokukhawuleza kwaye ngokufanelekileyo, I-Litepay iphume njengesixhobo esifanelekileyo sokuququzelela imali yeLitecoin kuluntu ngokubanzi. Nangona kunjalo, Ngo-Matshi 2018 i-CEO yeLitepay, uKenneth Asare, waqhagamshelana neLitecoin Foundation ukwazisa ukuyeka ubudlelwane kunye neSiseko. Le pothole yonakalise kakubi umfanekiso weLitecoin, kwaye bazisola ngesiganeko kunye nomfanekiso abanokuwunika. Ngokukodwa ngelo xesha, apho bekujongwe ukuba amashishini asebenza ngeVisa okanye ngeMasterCard nawo angakwenza ngeLitecoins. Kodwa ukukhubeka akufuneki kuphawule lonke ikamva lento, ke iLitecoin Foundation iyaqhubeka nokusebenza ijonge kwikamva, njengoko yayihlala injalo.
Akukho kwimo yokumisa I-Litecoin Foundation kunye neTokenPay ithenge i-20% yebhanki yaseJamani i-Weg Bank. Iziko lebhanki letyala lezindlu. Okwangoku kukho amarhe okungena nge-cryptoactive Lisk, isizathu esiphakamise ixabiso leLisk uqobo kule Matshi 2019.
Ngaphaya koko, uLitecoin uphumeze amanqanaba ahlukeneyo obuchwephesha. Phakathi kokuphuculwa kwayo koovulindlela esikufumanayo:
Ukwahlula amangqina. Isebenza ukunciphisa ifuthe lomda wobungakanani bebhloko. Ngale ndlela, ingxaki yokungabinakho ukuthengiselana isonjululwe kwaye yahlengahlengiswa.
Inethiwekhi yokukhanyisa (LN). Yinkqubo emiselweyo evumela imicropayments yangoko kunye nevolumu ephezulu. Iintlawulo azidingi kuqinisekiswa kwebhloko, kwaye zinokwenziwa ngesixa esincinci.
Ukutshintsha kweatom. Ebizwa ngokuba yi-atomic chain swaps. Ivumela intlawulo ukuba isebenze, ikhawuleze, yenze ikhontrakthi ekhuselekileyo kwaye inike uxanduva olulodwa lokuba iqela ngalinye elisebenzayo liqhutywa.
Imbali kunye nokuzibophelela kweLitecoin Foundation kube negalelo ekuveliseni ixabiso kwi-imali yedatha, isenza ukuba ukusetyenziswa kwayo kuqhubeke nokukhula kule minyaka idlulileyo. Ngapha koko, ukuphuculwa kwayo kwetekhnoloji kunye nokugxila kwayo kukhuphiswano nezinye iinkqubo zentlawulo kuyenze yazuza umhlaba kwiindawo ezahlukeneyo. Kwaye konke oku kuguqulela ukomeleza ukuthembakala koluntu olujikeleze iLitecoin.
1 Ngubani umdali weLitecoin?
2 Zeziphi iimpawu ezifanayo kunye nokwahlula iLitecoin kwiBitcoin?
3 Iinjongo zeLitecoin
4 Litecoin namhlanje